Uyifaka njani iLibreOffice 6.1 kwi-Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Uyifaka njani iLibreOffice 6.1 kwi-Ubuntu 18.04
Kwiiyure zokugqibela Inguqulelo entsha yeLibreOffice, iLibreOffice 6.1, ikhutshiwe. Inguqulelo eyazisa utshintsho olukhulu kwiofisi, nangona inguqulelo yesi-6 yale suite yakhutshwa kungekudala. I-FreeOffice 6.1 yazisa utshintsho phantse kuzo zonke iinkqubo ezenza iofisi kwaye sele ikwenze ngokwezifiso iimeko zeWindows.
I-Libreoffice 6.1 yazisa ngokuqokelelwa kwe icon yeCoLibre yemeko yeWindows, Ingqokelela yee icon eyahlukileyo kule izayo Ubuntu kodwa kubalulekile ukuba sifuna ukuba abasebenzisi beWindows baqale ukusebenzisa iSoftware yasimahla endaweni yeSoftware yabucala.KwiLibreOffice 6.1 Umbhali ukusebenza kwepage kwifomathi ye-Epub kunye nokuthumela ngaphandle kuphuculwe. Ukufundwa kweefayile ze-.ls kuye kwaphuculwa kolu hlobo kwaye I-FreeOffice 6.1 Isiseko sitshintsha i-injini yayo ephambili kwiinjini esekwe kwi-Firebird, eyenza ukuba inkqubo ibe namandla ngakumbi kunangaphambili ngaphandle kokuphulukana nokuhambelana noovimba beenkcukacha. Ukudityaniswa kweedisktops ezingezizo ze-Gnome nako kuye kwaphuculwa, kuba iyahambelana ngakumbi kwiidesktops ezinjengePlasma. Ukulungiswa kweebugs kunye neengxaki kukwakhona kule nguqulo yeLibreOffice. Olunye utshintsho kunye nezilungiso zinokufumaneka kwi amanqaku okukhululwa.
Ukuba sifuna ukufaka iLibreOffice 6.1 ku-Ubuntu, kufuneka siyenze ngokusebenzisa ipasile ekhawulezileyo. Le phakheji sele inayo le nguqulo kwisiteshi sayo soMgqatswa, ke ukufaka le nguqulo kufuneka sivule i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Oku kuya kuqala ukufakwa kweLibreOffice 6.1. Ukuba senza ufakelo oluncinci lwe-Ubuntu kwaye sineLibreOffice 6 kwiphakheji ye-snap, Kungcono ukuqala ukukhipha i-LibreOffice kwaye emva koko wenze ufakelo lwexesha elinye lweLibreOffice 6.1. Kungayindinisa, kodwa Ubuntu iya kusebenza ngcono kunokuba ineenguqulelo ezimbini ezahlukeneyo zeLibreOffice kwaye iya kongela nendawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Uyifaka njani iLibreOffice 6.1 kwi-Ubuntu 18.04
UFrancisco Antonio Nocetti Anziani sitsho
Phendula uFrancisco Antonio Nocetti Anziani
U-Ervin Varela Solis sitsho
Phendula u-Ervin Varela Solis
UJordi Agustí sitsho
Ifakwe kwaye isebenza ngokugqibeleleyo (ngesiCatalan).
Ukuyifaka nge-snap, ndicinga ukuba ayizukuhlaziya nge-Ubuntu Update Manager, akunjalo?
Phendula Jordi Agustí
Ndizamile kwaye isebenza njengekhubalo.
Ngendlela endiyichaza ngayo into eye yandothusa kakhulu, iGuadalinex ngoku iqhutywa ngabasebenzisi hayi iJunta de Andalucía
Isebenza ngokugqibeleleyo, kwaye sele yongezwa kwivenkile yesoftware Ubuntu.
Awudingi ukuvula i-terminal ukuyifaka. Nangona okwangoku andiboni mahluko mkhulu phakathi kwenguqulelo entsha kunye neyangaphambili. Kodwa ngomnye umba
Isebenza ngokugqibeleleyo. Kodwa ungandixelela ukuba kunokwenzeka ukufaka olunye ulwimi ngendlela efanayo kwaye uncede nge-snap?
Ndibonile ukuba kukho ezinye iilwimi kwiphepha leLibreoffice, kwimeko yam nditshintshela kulwimi lwesiSpanish kwilaptop nakwisiNgesi kwenye ilaptop.
Khuphela nge-torrent iphakheji (andikhumbuli i-snap okanye i-deb) kunye nefayile yolwimi eyahlukileyo ngomjelo. Nangona emva koko ndancama ndaza ndayifaka kwiziko elithambileyo Ubuntu
Jonga ubumbeko okanye ukhetho, mhlawumbi kukunika enye indlela okanye ungatshintsha ulwimi okanye ufake enye.
Molweni kulungile !!! unyaka olungileyo kubo bonke, ndabelana nani, linux ezona nkqubo zintathu zisebenzayo, 1) Ubuntu iseva ene-desktop (ukukhetha) kunye nezicelo ozithandayo, 2) OSX (iSierra okanye ngaphezulu) inkqubo yokusebenza egqwesileyo, ekhawulezayo, ezinzileyo, ikhonsoli iyafana neLinux kodwa inzima kancinci, kwaye 3) haha, iifestile ezithandekayo, apho yonke into ikhona kodwa ingazinzanga. yintoni indida. Imibuliso kubo bonke. UMariano.
IDamtrax Lopez sitsho
Kufakwe kwaye kuyasebenza. Enkosi.
Phendula kwiDamtrax Lopez
ULuis Fernal sitsho
Kwi-lubuntu 18.04 umthetho 'we-snap' awuzange usebenze, ndawuthathela indawo ngo "apt-get" ... kwaye yafaka yonke into kwimizuzwana embalwa, yonke into ukuya kwiDathaBase ekwakufuneka ibekwe ecaleni ngaphambili.
Onjani ukuba mhle umsebenzi abawenzileyo!
Phendula uLuis Fernal
Ku-Ubuntu 18.04 yonke ipakethe yafakwa nale:
Sudo apt-fumana ukufaka libreoffice
Iindlela ezimfutshane ezinokusinceda ukuba sivelise ngakumbi nge-Ubuntu 18.04